Medicine ဆေးဆိုတာ တန်ခိုးရှိတယ် - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
Medicine ဆေးဆိုတာ တန်ခိုးရှိတယ်
ဆရာခင်ဗျာ ရောဂါကြီးတွေရခဲ့ဘူးတဲ့အတွက် အင်္ဂလိပ်ဆေးများ နှစ်ရှည်လများ သောက်လာသူမှာ အသက်အရွယ် ရလာလျှင် ဦးနှောက် အာရုံကြောအားနည်းခြင်း ထိခိုက်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသလားဗျား။ အကယ်၍ အားနည်းထိခိုက်ခဲ့လျှင် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များ ညွှန်ကြားပေးစေလိုပါ၏။
ဆေးဆိုတာ တန်ခိုးလိုပဲ။ သက်သာစေမယ်။ ပျောက်ကင်းစေမယ်။ ဆေးတိုင်းမှာ Dose ဆေးအလေးချိန်နဲ့ Course ဆေးသုံးကာလရှိတယ်။ ရာသက်ပန်သောက်ရမယ့်ဆေးဆိုတာ မရှိပါ။ ဆေးတမျိုးချင်း၊ လူတဦးချင်းကိုပြောတာနဲ့ မလုံလောက်သေးပါ။ လိုအပ်ရင် ဆေးအမျိုးအစားနဲ့ ဆေးအလေးချိန်ပြောင်းရတယ်။ ဥပမာ သွေးတိုးဆေး။ ဆေးတိုင်းမှာ ဆရာဝန်သုံးဆေးဖြစ်ဖြစ်၊ ဗမာဆေး၊ တိုင်းရင်းဆေး၊ ဘယဆေး၊ တရုပ်ဆေးဖြစ်ဖြစ် ဘေးထွက်ဆိုကျိုးတွေရှိပါတယ်။ ဆေးမတည့် အလာဂျီဖြစ်တာလည်းရှိပါတယ်။
Dose (ဒို့စ်) = ဆေးကို တကြိမ်လျင် မည်မျှပေးရသည်ကို ဆိုလိုသည်။ (ဒို့စ်)သည် လူနာ၏ အသက်ပေါ် မူမတည်၊ လူနာ၏ ကိုယ်အလေးချိန် အပေါ်မူတည်သည်။ တကြိမ်လျင် ဆေးအလေးချိန်မည်မျှ တိုက်ရမည်။ တနေ့ကို အကြိမ်မည်မျှ တိုက်ရမည်၊ အတိအကျ ညွှန်းရသည်။ အစားနှင့်နီး-ဝေးရမည်၊ ရေများများသောက်ရန်လို-မလို၊ ဆေးသောက်ပြီး နားရန်လို-မလို၊ အခြားဆေးများ နှင့်အတူတိုက်ရ-မတိုက်ရ စသဖြင့်လည်း ညွှန်းပေးရမည်။
Course (ကို့စ်) = ဆေးကို မည်မျှကြာကြာပေးရမည်။ ပဌမ (ကို့ စ်)ပြီးနောက် ဒုတိယ(ကို့ စ်) လိုချင်လိုမည်။ ဥပမာ မေးခိုင်ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးကို တလခြား နှစ်ခါထိုးရသည်။ တီဘီဆေးများပေးလျှင် ၃ လ၊ ၆ လ၊ ၉ လ။
. Symptomatic treatment ရောဂါလက္ခဏာကို သက်သာစေရန်ကုသခြင်း၊
. Curative treatment ရောဂါဖြစ်စေသည့် အကြောင်းရင်းအား ကုသခြင်း၊
. Placebo လူနာကျေနပ်ရစေရန် ကုသခြင်း၊
. Radical cure ရောဂါစင်အောင်ကုသခြင်း၊ (ငှက်ဖျားရောဂါ၌ သုံးတတ်သည်)
. Prescription ဆေးစာ၊
Routes of administration ဆေးပေးရန်လမ်းကြောင်းအမျိုးမျိုး
၁။ Topical (တော့ပီကယ်) အပေါ်ယံမှပေးခြင်း၊
- Epicutaneous (အရေပြားပေါ်သို့ပေးခြင်း၊) e.g. allergy testing, topical local anaesthesia ထုံဆေး၊ ဆေးတည့်မတည့် စမ်းခြင်း
- Inhalational (ရှူဆေး၊) e.g. Asthma medications ပန်းနာဆေး
- Enema (စအိုမှပေးခြင်း၊) e.g. contrast media for imaging of the bowel ဝမ်းခြူခြင်း။
- Eye drops (မျက်စိထဲထည့်ခြင်း၊) (onto the conjunctiva), e.g. antibiotics for conjunctivitis မျက်စဉ်း
- Intranasal (နှာခေါင်းထဲထည့်ပေးခြင်း၊) (into the nose), e.g. decongestant nasal sprays နားဆေးရည်
- Vaginal (မွေးလမ်းကြောင်းထဲထည့်ခြင်း၊) e.g. topical estrogens, antibacterial
၂။ External အပြင်မှထည့်ပေးခြင်း
Oral/ Orally/By Mouth (ပါးစပ်မှပေးခြင်း၊) ဆေးပြား၊ ဆေးရည်၊ ဆေးတောင့်)
By gastric feeding tube (အစာလမ်းထဲပြွန်ဖြင့်ပေးခြင်း)
၃။ Parenteral by injection or infusion ထိုးသွင်းပေးခြင်း
IV = intra-venous သွေးပြန်ကြောထဲသွင်းခြင်း
IA = intra-arterial သွေးလွှတ်ကြောထဲသွင်းခြင်း
IM = Intra-muscular ကြွက်သားထဲထိုးခြင်း
IC = Intra-cardiac နှလုံးထဲထိုးခြင်း
S/C = Sub-cutaneous အရေပြားအောက်ထဲထိုးခြင်း
IO = Intra-osseous infusion အရိုးထဲသွင်းခြင်း
ID = Intra-sermal အရေပြားထဲသွင်းခြင်း
IT = Intra-thecal ခါးရိုးဆစ်ပြွန် (စပိုင်နယ်-ကယ်နယ်) ထဲသွင်းခြင်
IP = Intra-peritoneal ဝမ်းဗိုက်အခေါင်း (ပယ်ရီတိုနီယမ်) ထဲသွင်းခြင်း
၄။ Other means အခြားနည်းလမ်းများ
Epidural (အပီဂျူရယ်) ခါးရိုးဆစ်ထဲအရည်သွင်းခြင်း
ဆေးအုပ်စုများ (၉) စု
၁။ Antacids အစာအိမ် အက်စစ်ဓါတ်ပျယ်ဆေးများ၊ Aluminium Hydroxide, Magnesium Trisilicate, Magnesium Carbonate, Calcium Carbonate
၂။ Antibiotics ပဋိဇီဝဆေးများ၊ ရောဂါပိုးများကို နိုင်သည့်ဆေးများ၊
ပဋိဇီဝဆေးများ အုပ်စု (၁၃) မျိုး
1) Aminoglycosides (အမိုင်နိုဂလိုင်ကိုဆိုက်) အုပ်စု၊ အုပ်စုခွဲ (၇)မျိုးရှိသည်။
2) Carbapenems (ကာဘာပင်နင်) အုပ်စု၊ အုပ်စုခွဲ (၂)မျိုးရှိသည်။
3) Cephalosporins 1st generation (ကက်ဖလိုစပိုရင် ပဌမမျိုးဆက်အုပ်စု) အုပ်စုခွဲ (၅)မျိုးရှိသည်။
4) Cephalosporins 2nd generation (ကက်ဖလိုစပိုရင် ဒုတိယ မျိုးဆက်အုပ်စု) အုပ်စုခွဲ (၆)မျိုးရှိသည်။
5) Cephalosporins 3rd generation (ကက်ဖလိုစပိုရင် တတိယမျိုးဆက်အုပ်စု) အုပ်စုခွဲ (၈)မျိုးရှိသည်။
6) Cephalosporins 4th generation (ကက်ဖလိုစပိုရင် စတုတ္ထမျိုးဆက် အုပ်စု)
7) Macrolides (Azithromycin, Clarithromycin, Erythromycin (မက်ခရိုလိုက်အုပ်စု) အုပ်စုခွဲ (၃)မျိး ရှိသည်။
8) Penicillins (Amoxicillin, Ampicillin, Cloxacillin, Penicillin G (Benzylpenicillin Na or K), Penicillin V (Phenoxymethylpenicillin K), Piperacillin, Ticarcillin) (ပနယ်စလင်) အုပ်စု၊
9) Polypeptides Polypeptides (Bacitracin, Colistin) (ပေါ်လီပက်ပတိုက်) အုပ်စု၊
10) Quinolones Quinolones (Ciprofloxacin, Enoxacin, Levofloxacin, Lomefloxacin, Norfloxacin, Ofloxacin) (ကွီနိုလုံး) အုပ်စု၊
11) Sulfonamides (Sulfacetamide, Trimethoprim-Sulfamethoxazole) (ဆာလ်ဖိုနမိုက်) အုပ်စု၊
12) Tetracyclines (Demeclocycline, Doxycycline, Tetracycline) (တက်ထရွာဆိုက်ကလင်း) အုပ်စု၊
13) Miscellaneous antibiotics အခြားသော ပဋိဇီဝဆေးများ (၁၁) မျိုးရှိသည်။
၃။ Anticholinereics/Antispasmodics (အင်တီ-ကိုလီနားဂျစ်) (အင်တီ-စပတ်စ်မိုးဒစ်) အနာသက်သာဆေး၊
၄။ Antihistamines အင်တီ-ဟစ်တမင်း၊ Avil, Burmeton, Alrid, Citrizine
၅။ Antihypertensive အင်တီ-ဟိုင်ပါတန်းဆစ်ဖ်၊ သွေးတိုးကျဆေး၊
- Diuretics (ဆီးသွားစေသည့်ဆေး) Hydrochlorothiazide, (Lasix) and Trosemide (Demadex), the combination of Triamterene and Hydrochlorothiazide (Aquazide), and metolazone (Zaroxolyn)
- Beta-blockers (ဘီတာ-ဘလော့ကား) (Antolol), Propranolol, (Inderal), Metoprolol, Nadolol, Betaxolol, Acebutolol, Pindolol and Bisoprolol
- ACE inhibitors (အေစီအီး-အင်ဟဗစ်တား)၊ (Enalapril, Captopril, Lisinopril. Benazepril, Quinapril, Perindopril, Ramipril, Trandolapril, Fosinopril (Monopril), and Moexuoril
- Angiotinsin receptor blocker (ARB) (အေအာရ်ဘီ) Losartan, Irbesartan, Valsartan, Candesartan, Olmesartan, Telmisartan, and Eprosartan
- Calcium channel blockers (CCBs) (စီစီဘီ) (Amlodipine, Sustained release Nifedipine, Felodipine, and Nisoldipine)
- Alpha – blockers (အာလ်ဖါ-ဘလော့ကား) အုပ်စု (Clonidine)။
၆။ Beta blockers = (ဘီတာ-ဘလော့ကား) အလိုအလျောက်တုံ့ပြန်သည့် အာရုံကြောစနစ် Autonomic (involuntary) Nervous System တွင် အရေးပါသော Adrinaline (Epinephrine) ကို တားဆီးမှု လုပ်သည့် ဆေး။ နှလုံးတင်းအား လျော့စေသည်။ နှလုံးခုံနှုန်းလျော့မည်။ နှလုံး၊ ဦးနှောက်နှင့် တကိုယ်လုံးရှိ သွေးကြောများ၏ ကြုံ့နိုင်စွမ်းနည်းစေမည်။ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါတို့ အတွက် ဆေးများ၊ နှလုံးခုံနှုန်း မမှန်သည့် Cardiac arrhythmias, Tachycardias ရောဂါအတွက် သုံးသည်။ နှလုံးက အောက်စီဂျင် လိုအပ်မှုအား လျော့ချပေးသဖြင့် Angina pecetoris ခေါ် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ အတွက်သုံးသည်။ သွေးတိုးကိုလည်းကျစေသည်။ အခြား အသုံးဝင်မှုများမှာ Migraine မိုင်ဂရင်း ခေါင်းကိုက်-ခေါင်းမူး ရောဂါ၊ ခြေလက်တုံအကြောက်ရောဂါ၊ Stage fright (Social phobia) အကြောက်ရောဂါတမျိုးတို့ဖြစ်သည်။
၇။ Corticosteroids = ကော်တီကိုစတီရွိုတ်အရောင်လျော့စေသည့်ဆေး၊ နီခြင်းကို သက်သာစေသည်။ အလာဂျီ သက်သာစေသည်၊ ရောဂါလက္ခဏာကို သက်သာစေသည့်ဆေးများ၊ အောက်ပါတို့အတွက်သုံးသည်။ Endocrine Disorders (အင်ဒိုခရိုင်း)ရောဂါများ၊ Rheumatic Disorders ရူမက်တစ်ရောဂါ၊ Collagen Diseases (ကိုလာဂျင်)ရောဂါ၊ Dermatologic Diseases အရေပြားနာများ၊ Allergic states (အလာဂျီ) ဖြစ်ခြင်း၊ Ophthalmic diseases မျက်စိရောဂါများ၊ Respiratory Disorders အသက်ရှူလမ်းရောဂါ၊ Hematoloeic Disorders သွေးရောဂါ၊ Neoplastic Diseases ကင်ဆာရောဂါ၊ Edematous states ကိုယ်ရောင်ခြင်း၊
၈။ Dirutics = ဆီးသွားစေသည့် သွေးတိုး၊ ကိုယ်ရောင်ခြင်းများအတွက် သုံးသည့်ဆေးများ၊
၉။ NSAID = (စတီရွိုက်) မပါသော အနာ-အဖျား-အရောင်ကျ ဆေးများ၊ အများဆုံးသော အကိုက်-အဖျား-အနာ သက်သာဆေးများဖြစ်သည်၊
Side effects ဆေး ဘေးထွက်သက်ရောက်မှုများ
Allergic reactions ဆေးနဲ့မတည့်လို့ အလာဂျီရခြင်း၊ တယောက်မှာတည့်ပေမယ် နောက်တယောက်က မတည့်တာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အရေပြားအနီပြင်ထွက်တာလေးကနေ သေဆုံးတဲ့အထိဆိုးနိုင်တယ်။ Diphenhydramine (Benadryl) ဆေးဆိုရင် အာခေါင်ခြောက်မယ်။ Warfarin (Coumadin, Jantoven) သွေးမခဲဆေးဆိုရင် သွေးယိုနိုင်တယ်။ တချို့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေက ဆေးဖြတ်တာနဲ့ ပျောက်ကင်မယ်။ တချို့က ရာသက်ပန်ပြန်မကောင်းပါ။ ဆေးသောက်ရင် အကျိုးနဲ့ အဆိုးကိုချိန်ဆရတယ်။ ဥပမာ ကင်ဆာဆေး။